फिफा विश्वकप : उद्घाटन खेलमा आयोजक रुस र साउदी अरेबीया भिड्दै, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
फिफा विश्वकप : उद्घाटन खेलमा आयोजक रुस र साउदी अरेबीया भिड्दै
एजेन्सी । विश्व फुटबलको महासंग्राम रुस विश्वकप २०१८ को पर्खाइ आजबाट सकिएको छ । विश्वकपमा आजबाट ग्रुप स्टेजका खेलहरु सुरु हुँदैछन् ।
जसअन्तर्गत आज उद्घाटन खेलमा आयोजक रुस र एसियाली मूलुक साउदी अरेबीयाले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । रुस र साउदी अरेबीयाको खेल नेपाली समयअनुसार राति पौने ९ बजे रुसको लुजनिकी स्टेडियममा सुरु हुनेछ ।
रुस आयोजक टोली भएका कारण उसले छनौट चरणका खेल नखेली विश्वकपमा स्थान बनाएको टोली हो । साउदी अरेबीया भने छनौट चरण पारगर्दै प्रतिस्पर्धामा उत्रेको टोली हो । रुस र साउदी अरेबीयाको इतिहास हेर्दा उनीहरुबीच अहिलेसम्म मात्र २ पटक भेट भएको छ ।
जसमा रुसले साउदीलाई एकपटक पराजित गरेको छ । अर्को एक खेलमा दुवैले बराबरी खेलेका थिए । विश्व वरियतामा भने साउद अ‍ेरेवीया रुसभन्दा बलियो छ । साउदी विश्व वरियताको ६७ औं स्थानमा छ भने रुस ७० औं वरियतामा छ ।
यसैगरी दुवै टोलीको गएको पाँच खेलहरुलाई मध्यनजरगर्दा साउदी केहि बलियो देखिएको छ । साउदीले पाँच खेल खेल्दा २ खेलमा जित निकालेको छ भने ३ खेलमा हार व्यहोरेको छ । रुसभने ५ खेलमध्य कुनैमा विजयी भएको छैन ।
रुसले २ खेलमा बराबरी खेल्दा बाँकी ३ खेलमा पराजय व्यहोरेको छ ।
आज दुवै टोली जितका लागि मैदान उत्रनेछन् । रुस, साउदी अरेबीया सँगै ग्रुप एमा इजिप्ट र उरुग्वेपनि समावेश छन् । प्रत्येक टोलीले एकले अर्कासँग एक–एक पटक प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । अंकका आधारमा टोलीका विजेता र उवविजेता नकआउट चरणमा प्रवेश गर्नेछन् ।